I-CIDE 2021 ibilapha njengoko icwangcisiwe, i-YALIS ibuye kwakhona izisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso ezintsha
I-Ara yoKwenziwa kweNdlu yonke eQhelekileyo iyeza Ngophuculo olupheleleyo lwamanqanaba okusetyenziswa kunye nokuhlaziywa okuqhubekayo kweekhonsepthi zokusetyenziswa, ukwenziwa kwendlu yonke kube yinto engenakuphikwa yokusetyenziswa kwekhaya. I-China lilizwe elinemali enkulu encinci ...
Ngenxa yefuthe le-COVID-19, i-biennial Koelnmesse yatshintshwa yenziwa liqonga ledijithali likaKoelnmesse. I-Interzum @ ikhaya liya kuqhubeka ukusuka ngo-04 ukuya ku-07.05.2021. Kwikhaya le-interzum @, iinkampani ezingaphezu kwe-140 ezivela kumazwe angama-24 ziya kuzisa iimveliso zazo kunye neenkonzo kwiqonga ledijithali likaKoelnmesse. ...
I-YALIS ibonakalisa phezulu kwi-124th Canton Fair
ngomphathi ku 21-03-21
Impumelelo enkulu ku-YALIS kwi-Canton Fair eGuangzhou apho kukho ingqokelela entsha yokubamba. KwiCanton Fair eGuangzhou, esona siganeko sibaluleke kakhulu e-China, nangaphezulu kweenkampani ezibonisa ii-25500 ezithathe inxaxheba kuyo. Ngaphambi ...
Umboniso we-16 we-Indo Build Tech eJakarta
Indo Yakha iTech Jakarta umboniso obubanjwe nge-2 kaMeyi ukuya kwi-6 kaMeyi e-ICE (e-Indonesia Convention Exhibition) u-YALIS naye uye kulo mboniso. Eyona inkulu kakhulu kwi-Indo Yakha iTeknoloji yoMnyhadala kunye nolwakhiwo oluphambili kunye ne ...
Iziganeko ze-Interzum 2019
Nge-Agasti ka-2019, iqela le-YALIS liye kwi-Interzum Fair eCologne, eJamani. Njengoko sonke sisazi, i-Interzum yeyona nto ikhokelayo kurhwebo lwefenitshala kunye noyilo lwangaphakathi. Sijonge phambili ekwandiseni ngakumbi iimarike zaseYurophu kwindawo yalapha. ...